လုပ်ငန်းခွင်မှာ HRM ကို ဆောင်ရွက်ကြ တဲ့အခါ ထိရောင်အောင်မြင်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်မဖြစ် ဘယ်လို အချက်အလက်တွေနဲ့ တိုင်းတာမလဲ
လုပ်ငန်းခွင်မှာ Human Resource Management ကို ဆောင်ရွက်ကြ တဲ့အခါ ထိရောင်အောင်မြင်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်မဖြစ် ဘယ်လို အချက်အလက်တွေနဲ့ တိုင်းတာရင် ရနိုင်ပါသလဲ။HR Management Effective ဖြစ်မဖြစ် တိုင်းတာတဲ့နေရာမှာ Quantitative (အရေအတွက်) နဲ့ Qualitative (အရည်အသွေး) ဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ Quantitative နဲ့ တိုင်းတာတာကို Statistical Indices...
Visits : 3844
အကြွေးတွေ အမြဲတမ်းမတင်နေဖို့ ရှောင်သင့်တဲ့ အချက် (၇) ချက်ကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာအလေ့အကျင့်ပိုက်ဆံချွေတာတယ်ဆိုတာ အလေ့အကျင့်တစ်ခုပါ။ သင့်မှာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာ မွေးယူရမယ့် အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကွဲကွဲပြားပြားပိုက်ဆံဆိုတာ သုံးရတဲ့အရာပါ။ သင်လိုချင်တာကိုရဖို့ အရင်းအနှီးပြုရတဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဘာလိုချင်တယ်၊ သင်ဘာဖ...
တစ်နေ့ကို တစ်နာရီလောက် ဒါတွေလုပ်ဖို့ အချိန်ပေးလိုက်ပါ။ မင်းဘဝပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်။ မင်းရဲ့ အလုပ်ချိန် ညနေ6နာရီမှာ ပြီးပြီးတော့ မင်းက ည သန်းခေါင် 12 နာရီမှ အိပ်ရာဝင်တယ်ဆိုပါစို့။ ဒီကြားထဲက6နာရီကို မင်းဘယ်လို အသုံးချပါသလဲ? TV ကြည့်တာလား? တကယ်တော့ ဒီအချိန်ကို မင်းဘယ်လိုအသုံးချတယ်ဆိုတာက မင်းထင်တာထက် ပိုအရေးကြီးပါတယ်။လူတော်တော်များများထင်နေတာက ကျွန်တ...
Visits : 4286
မလွယ်ပေမယ့် ဒီလိုနည်းနဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူတွေ တကယ်ရှိပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်ထူးကိုယ်ချွန် သူဌေး တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီစည်းမျဉ်းတွေက ဘယ်နယ်ပယ်မှာမဆို သင့်ကိုအောင်မြင်စေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမှာမှာ သေချာပါတယ်။၁။ စိန်ခေါ်ပြီး လုပ်ဆောင်ပါ။ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန်ပြီး သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်လာသူတွေ...
ခေါင်းဆောင်တိုင်းတစ်ကိုယ်ရေ အထီးကျန်မှုဒဏ်ခံရကြပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုသည် ထိ ထိရောက်ရောက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သောခေါင်းဆောင်တိုင်းအတွက် အရေးပါလှပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဖွဲ့အစည်းရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်သည့် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် မိမိကိုယ်မိမိ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ရန် အောက်ပါမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက် ၇ ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းထားရန်လိုအပ်...
Visits : 4778
49 - 54 of ( 73 ) records